बाख्राको नमुना पकेट क्षेत्र बनाउँदै लमही – Rajmarg Online
बाख्राको नमुना पकेट क्षेत्र बनाउँदै लमही
देउखुरी, मंसिर । लमही नगरपालिका वडा नं. ९ रिहारमा मानसिंह वलीको घर हो । वली बाख्रा व्यवसायी हुनुहुन्छ । वली लमही नगरपालिका पशु सेवा उपशाखाले आयोजना गरेको तीन दिने व्यवसायीक बाख्रापालन तालिममा सहभागी भएर बाख्रापालनका लागि भरपुर ज्ञान हासिल गर्नुभयो ।
बिगत दुई वर्षदेखि बाख्रापालन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएका वलीले भन्नुभयो, ‘यो भन्दा अगाडि बाख्रापालन व्यवसाय सम्बन्धी कुनै तालिम लिएको थिएन । यो तालिममा सहभागी भएर बाख्रापालन सम्बन्धि धेरै ज्ञान हासिल भएको छ ।’ बयालिस वटा बाख्रा पालिरहेको भन्दै वलीले थप्नुभयो, ‘कुन जातिका बाख्रा कसरी पाल्ने ? कुन जातिको बाख्रा पाल्दा किसानहरुलाई धेरै आम्दानी हुन्छ भन्ने तालिमबाट प्रष्ट भयो ।’
साउदीमा दुई वर्षको समय बिताएर फर्किएका वलीले गएको दसँै तिहारको बेला ९५ हजारको बाख्रा बेचेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै लमही नगरपालिका वडानम्वर–१ सुन्डबरीका भीमा भुसालले पनि दशवटा बाख्रा पाल्नुभएको छ । जन्मेका पाठापाठीहरुलाई कसरी हुर्काउने, पाठापाठीहरूलाई कस्तो ठाउँमा राख्दा उचित हुन्छ ? यी र यस्ता विषयमा पहिला आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउँदै, नगरपालिका पशु सेवा उपशाखाको तीनदिने व्यवसायीक तालिम आफ्ना लागि बरदान भएको बताउनुभयो ।
‘अहिले धेरै कुराहरू सिकियो । यो भन्दा अगाडि बाख्राको खोर कसरी बनाउने ? खोर सफा कसरी गर्ने मलाई केहि थाहा थिएन । अहिले यो तालिमले गर्दा मलाई धरै सजिलो भएको छ’, भुसालले भन्नुभयो, ‘अबका दिनहरुमा मैले आफ्नो व्यवसायलाई पनि बढाउन सक्छु जस्तो लाग्छ ।’
यस्तै तीन दिने व्यवसायिक बाख्रा तालिमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै लमही नगरपालिका उप–प्रमुख देवका बेल्वासेले लमही नगरपालिकाअन्तर्गत–९ नम्वर वडा भनेको बाख्रापालनको पकेट एरिया हो भन्दै, किसानहरुलाई आयआर्जन र अनुदानका लागि लमही नगरपालिकाले सधैँ साथ र सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
पकेट एरियामा बाख्रापालन सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गरी किसानहरुको पक्षमा रहेर आफूले किसानहरुकै हीत हुने गरी काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । तालिमको प्रशिक्षकमा लमही नगरपालिका पशु सेवा उपशाखा कार्यालयका अधिकृत शिवराज न्यौपाने रहनुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार प्रिया स्मृती गजमेरले गर्नुभएको थियो ।